सन्यास लिने मुडमा अमिताभ !::Nepaloutline.com
सन्यास लिने मुडमा अमिताभ !
काठमाडौँ,१४ मंसिर । बलिउडका बादशाह अमिताभ बच्चनको सम्मानमा आज पनि बलिउडकर्मीहरु शिर निहुराउँने गर्छन् । ७७ बर्षको उमेरमा पनि त्यही जोश र जाँगरका साथ उनी बलिउडमा निरन्तर काम गरिरहेका छन् । उनलाई आज पनि फिल्महरुको कमी छैन भने टेलिभिजन र बिज्ञापनको दुनियामा उनको राज अझै पनि कायम नै छ । सन १९७० को दशकमा बलिउडमा नसोचेको सफलता र लोकप्रियता कमाएका उनले अब भने अभिनयबाट सन्यास लिने सोच बनाएका छन् ।
बढ्दो उमेरसंगै स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्याहरु देखिन थालेपछि उनले यस्तो सोच बनाएका हुन् । अमिताभले आफनो ब्लगमा लेख्दै आफनो शरीरले आफुलाई अब अबकाश लिन भनेको भनी उल्लेख गरेका छन् । उनले लेखेका छन् “अब मैले अबकाश लिनु पर्छ । टाउकोले अरु केही सोचिरहेको छ र औँलाले अर्काे सोचिरहेको छ । यो एक सन्देश हो” । हुन त अमिताभलाई हुने गरेको स्वास्थ्य समस्याको कारण पनि चिकित्सकहरुले अब आराम गर्नु पर्ने सल्लाह दिँदै आएका छन् तर पनि निरन्तर काममा रहेका छन् ।
सम्भवत अब भने उनलाई सोही कारण पनि अभिनयबाट सन्यास लिन बेला आएको भनेर महसुस भएको हुन सक्छ । बलिउडमा एक से एक ब्लकबस्टर फिल्म दिएका अमिताभको बलिउडलाई अन्तराष्ट्रिय बजारसम्म पु¥याउँन ठूलो योगदान दिएका छन् । सोही योगदानको कारण पनि उनलाई भारतीयहरुले निकै सम्मान दिने गर्छन् । हाल उनी “ब्रम्हास्त्र” को सुटिङमा व्यस्त रहेका छन् ।
अनुष्का श्रेष्ठ ‘मिस वर्ल्ड’को भोटिङमा दोश्रो स्थानमा
दोस्रो भ्वाइस अफ नेपालको उपाधि राम लिम्बुलाई, भव्य समारोहकाबीच आए नयाँ प्रतिभा
बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत गैह्र सरकारी संस्था गुडविभ नेपालको अध्यक्षमा समिक विक्रम शाह चयन...
काठमाडौँ,२२ मंसिर । नेपाल पर्यटन बोर्डले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्ष्य गरेर...
काठमाडौँ,२२ मंसिर । ‘मिस नेपाल वर्ल्ड’ अनुष्का श्रेष्ठ ‘मिस वर्ल्ड’ को भोटिङमा दोश्रो...